‘सशस्त्रले सघाएको भए सर बच्नुहुन्थ्यो’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
‘सशस्त्रले सघाएको भए सर बच्नुहुन्थ्यो’
एसएसपी मारिँदाका प्रत्यक्षदर्शी अंगरक्षकको बयान
भाद्र १०, २०७२ सुधीर शर्मा
टीकापुर (कैलाली) — एसएसपी साबले पनि पिस्तोल बोक्नु भएको थिएन । मैले त घाइते भएपछि पिस्तोल निकाल्नै पाइनँ । सरले सशस्त्रलाई अनुरोध पनि गरेको हो– गोली चलाउ, गोलि चलाउ भनेर । तर उनीहरुले ‘हामीलाई आदेश छैन’ भने ।
सेती अञ्चलका प्रहरी प्रमुख, बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने गत भदौ ७ गते टीकापुर भिडन्तमा मारिँदा अन्तिम अवस्थासम्म उनको साथमा थिए– मानबहादुर बुढामगर । नेपाल प्रहरीमा हवल्दार रहेका उनी एसएसपी न्यौपानेको निजी अंगरक्षकका रुपमा विगत १० महिनादेखि कार्यरत थिए ।
त्यो कालो दिन– कोशिश गर्दागर्दै पनि आफ्ना कमान्डरलाई बचाउन नसक्दाको पछुतो अहिले पनि उनको आँखाभरी छचल्किन्छ । बिहीबार दिउँसो हामी टिकापुर, हाटचोक छेउको त्यही घरमा पुग्यौं, जहाँ अंगरक्षक बुढामगरले एसएसपी न्यौपानेलाई आक्रमणकारी जत्थाबाट जोगाउँदै–भगाउँदै ल्याइपुर्‍याएका थिए । पछाडिबाट अनेक घरेलु हतियारको प्रहार जारी थियो, जसको सामना गरिरहन अन्तत: न बुढामगरले सके, न न्यौपानेले, न त त्यहाँ उपस्थित सिमित प्रहरीहरुले ।
अघिल्ला प्रहारहरुबाट घाइते भइसकेका ठूलो ज्यानका एसएसपी न्यौपाने जेनतेन कोठाभित्र त छिर्न पाए, तर चुक्कुल लगाउन नपाउँदै अराजक हुलले घेरिहाल्यो । अनि कोठाबाट बाहिर घिसार्दै आँगनमा निकालेर विभत्स ढंगले हत्या गर्‍यो ।
त्यतिञ्जेलसम्म अंगरक्षक बुढामगर आफैं सख्त घाइते भइसकेका थिए । निरन्तरको प्रहारबाट उनको शरीरैभरी चोट लागेको छ, टाउकोमा सेतो पट्टी छ । तर, त्यस दिन यहाँ जे भयो, त्यसको चित्र उनको मन–मस्तिष्कबाट हटेको छैन– उनको आक्रोशमिश्रित बयानले यही भन्छ ।
आक्रोश यस अर्थमा कि उनको आरोप छ– आफूहरु (नेपाल प्रहरी) सँग पर्याप्त हतियार थिएन, भएको एउटा एसएलआर पनि एक गोली फायर गरेपछि चल्दै चलेन, तर सँगै रहेको सशस्त्र प्रहरीले बन्दूक चलाउनै मानेन्, त्यसैले त्यहाँ त्यत्रो ठूलो क्षति भयो । यदि कम्तिमा हवाई फायरसम्म गरिदिएको भए घटनाले यति दर्दनाक मोड नलिने उनको बुझाइ छ ।
एसएसपी न्यौपाने मारिएको त्यही घरको आँगनमा हामीले अन्य प्रत्यक्षदर्शीहरुको माझ बसेर यी युवा प्रहरीसँग लामो कुराकानी गरेका थियौं । प्रस्तुत छ, उनकै शब्दमा– टीकापुर त्रासदीको त्यो क्षण :-
‘त्यस दिन (भदौ ७) बिहान एसएसपी साब सिद्धार्थ होटलमा गएर नुहाइधुवाइ गरेर साढे १० बजे इप्रका (इलाका प्रहरी कार्यालय) जानुभएको थियो । त्यहाँ पुगेर खटनपटनको काम गर्नु भयो । ड्युटीहरु कहाँ गर्ने, कहाँ पठाउने भनेर सोधपुछ गर्नु भयो । अनि त्यहीं आँगनको गोलघरमा खाना खाएर अरु सरहरुसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सशस्त्रका एसपी (लक्ष्मण सिंह) साप आइपुग्नुभयो । त्यही बेला ‘प्रदर्शनकारीहरु निषेधित क्षेत्रभित्र आउन खोज्दैछन्, हामीलाई थप मद्दत चाहिन्छ’ भन्ने खबर फिल्डबाट बलराम बिष्ट इन्स्पेक्टर साबबाट आयो । कम्तीमा सात–आठ हजार मान्छेहरु आएको खबर थियो । ‘हाम्रो यति संख्याले केही हुँदैन’ भन्नुभयो इन्स्पेक्टर साबले ।
त्यो सुनेपछि सर (एसएसपी न्यौपाने) ‘ल ठिक छ, म आउँछु’ भनेर उठ्नुभयो । उहाँको गाडी अरुलाई पुर्‍याउन कतै गएको थियो, त्यसैले सशस्त्रका एसपी साबकै गाडी चढेर उहाँसँगै सर हिड्नुभयो । त्यसबेला दिउँसोको सवा १ बजेको थियो । हामी पनि पछि–पछि थियौं ।
उताबाट आन्दोलनकारीहरु ढुंगा, गुलेली हान्दै आउँदै थिए । हाम्रो र सशस्त्रको टोली सबै आइसकेपछि हामीले सडकमा अलि बलियो आड बनायौं । हामीसँग हतियारको नाममा दुइटा सटगन थिए । दुइटा ग्यासगन पनि थिए । छन त हामीसँग एउटा एसएलआर पनि थियो तर त्यसले काम गरेन । त्यसबाट एक राउन्डमात्र फायर भयो । त्यसपछि चल्दै चलेन । हामीले भएजति अश्रुग्यास र रबर बुलेटहरु हानिसकेका थियौं । केशव सर (इन्स्पेक्टर) ले सटगनबाट फायर गर्नु भयो भन्ने सुनेको थिएँ । त्यसपछि गोली र हतियार नभएपछि अरु उपाय भएन ।
अब के गर्ने ? हामीलाई चारैतिरबाट घेरिसकेका थिए । सशस्त्रका एसपी साब र उहाँका गार्ड भाग्दै भाग्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो । भीड उग्रगतिमा आइसकेको थियो । सर (एसएसपी न्यौपाने) आफू बच्न कुद्दै आउनुभयो । धानबारीमा नाली छ । उहाँ नालीमा अड्किनु भएको रैछ, त्यहाँबाट यहाँ घरसम्म मैले नै ल्याएको हो ।
सरले भन्नुभयो, ‘म योभन्दा अगाडि बढ्न सक्दिनँ, हिड्न पनि सक्दिनँ ।’ उहाँलाई चोट लागेको थियो, थाकि पनि सक्नु भएको थियो । उभिनै नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । मैले सरलाई ‘सेपरेट’ गरेर यहाँसम्म ल्याएँ । ‘म यहाँभन्दा अगाडि जान सक्दिनँ । जे हुनु भइहाल्छ, मरे पनि मरिहाल्छु,’ भन्नुभयो । अगाडि बढ्न नसक्ने भएपछि सरले ‘म यही घरमा लुक्छु’ भन्नुभयो । उनीहरुले हामी यतातिर आएको देखिसकेका थिए । त्यसैले मलाई देखेपछि यहाँ कोही लुकेका छन् कि भनेर खोज्लान् र मार्लान् भन्ने लाग्यो । त्यसैले म अगाडि बढ्दा झुक्केलान् र मतिरै आउलान भन्ने लाग्यो । तर इँटा र बाँसले लागेर खुट्टाले काम नगरेको कारण म आफैं घाइते भएँ । मेरो आँखामा ढुंगा लागेर मासुको चोक्टा उडेको थियो । आँखा नै नदेख्ने भएको थिएँ । अनि म घरअगाडिको धानबारीमा घोप्टें ।
त्यसपछि मलाई थाहै भएन, पछि थाहा भयो– एकैचोटी बेहोस अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइएको रहेछ ।
यहाँ एसएसपी साब र हामीलाई खेदाउँदै आएका केही व्यक्तिहरुले हेल्मेट प्रयोग गरेर आएका थिए । कतिले टाउकोमा रुमाल पनि बेरेका थिए । दाह्री पालेका पनि आएका थिए । नजिकबाट चिन्न सकिएन । उनीहरुसँग बाँसहरु थिए । बाँसहरुमा चेप्टा खुँडा बनाएर आएका । रड, भाला बनाएका । आर्सी, बेल्चा, फर्मा बोकेको आँखाले देखेको हुँ । घरेलु हातहतियार लिएर आफ्नो योजनाअनुसार आएका थिए । हामीले यस्तो हुन्छ भनेर सोचेकै थिएनौं । त्यही भएर ‘प्रिपेयर’ भएर आएका थिएनौं ।
भदौ ६ गते बेलुकी प्रहरी गणमा वार्ता भएअनुसार भोलि शान्तिपुर्वक प्रदर्शन गर्ने भनेका थिए आन्दोलनकारीले । उनीहरुले आफ्ना साथीहरुलाई हातहतियार लिएर भेला नहुनुस् भन्छौं भनेका थिए । त्यही हिसाबले यस्तो नहोला भनेर सर त्यत्तिकै आउनुभयो । मलाई पनि हाम्रो पुलिसका यतिका मर्लान् भन्ने लागेको थिएन । खासमा सशस्त्र (प्रहरी) ले पनि धोका दिएजस्तो लाग्छ किनभने उनीहरुले आफूसँग भएको हतियार नै प्रयोग गरेनन् ।
हामीसँग १० र २ जनाको टोली थियो । त्यतिले के गर्नु ? हाम्रो ढालडन्डाले के गर्ने ? एसएलआर थियो, त्यो पनि एक राउन्ड हानिसकेपछि रोग लागेर पड्केन । जसले एसएलआर बोकेको थियो, उसलाई माथिबाट बाँसले हानेर त्यो हतियार पनि खोसेर लगे ।
तिनीहरुले जब हाम्रा केटाहरुलाई हान्दै थियो, सशस्त्रले अगाडि पछाडि ‘ब्याक–अप’ भएर राउन्ड खोलेर चारैतिर फायर गरिदिएको भएदेखि हाम्रो मान्छेहरु यति मर्ने पनि थिएनन् र घाइते पनि हुने थिएनन् । जहाँसम्म लाग्छ, हाम्रो सर पनि बच्नुहुन्थ्यो । त्यहाँ घटना पनि त्यति हुने थिएन ।’
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७२ १८:१९
दूरसञ्चार कम्पनी पनि ‘पब्लिक’
भाद्र १०, २०७२ शिला पाण्डे
काठमाडौं — दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू पब्लिक कम्पनी भएर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने/नपाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । झन्डै ६ महिना अगाडि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पब्लिक कम्पनीमा जान चासो देखाएपछि प्राधिकरणले यसका लागि आवश्यक कानुनी बाटो तय गर्नका लागि अध्ययन गर्ने भएको हो ।
यो आर्थिक वर्षभित्र अध्ययन पूरा गरी पब्लिकमा जान खोज्ने कम्पनीको प्रक्रियालाई निकास दिने अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । प्राधिकरणले अध्ययनका क्रममा स्थानीय तथा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले पब्लिक रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने सम्बन्धमा औचित्य र सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने भनेको छ ।
यसका लागि प्रथम चौमासिकमा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि टीओआर तयार गर्नेछ । अध्ययनपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवामा निजीलाई पब्लिक रूपमा जान दिने/नदिने निर्णय गर्न सजिलो हुने अध्यक्ष झाले बताए । ‘केही कम्पनी आउन खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘ग्राहकको फाइदा र अन्य केही विषयमा प्रस्ट हुन अध्ययन गर्न खोजिएको हो ।’
एनसेल मात्र नभई स्मार्ट र यूटीएलका लागि पनि प्राइभेटबाट पब्लिकमा लान सजिलो होस् भन्नका लागि अध्ययन हुनैपर्ने उनले बताए । एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी (टेलिसोनारिया) को लगानी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको छ ।
यस्तो स्थितिमा पब्लिक बनाउन कुन कानुनी प्रक्रिया अपनाउने भनेर प्रस्ट हुन आवश्यक रहेको झाले बताए । ‘प्राधिकरण यी विषयमा प्रस्ट छैन,’ उनले भने ‘पब्लिक सेयर बिक्री गर्ने विषयमा सेयर बजारभित्र जान कानुनी रूपमा के गर्ने भनेर प्रतिवेदनले सम्पूर्ण कानुनी बाटो प्रस्ट्याउनेछ ।’ नेपाल टेलिकम सरकारी संस्था भएकाले यसका लागि सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अन्य संस्थासरह रहेको उनको भनाइ छ ।
निजी कम्पनीले कम्पनीले पब्लिकमा जानका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारमा गई त्यसअनुरूप दर्ता हुनुपर्ने र सेयर बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बैंकका हकमा ५१ प्रतिशत सेयर लगानीकर्ता र बाँकी पब्लिक गरिन्छ । त्यसअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीले पनि आफ्नो सेयर कसरी बाँड्ने भनेर पब्लिकमा दर्ता हुँदा नै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसको एक वर्षपछि कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्छ ।
एनसेलले ६ महिना अगाडि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गई पब्लिकमा जान के कस्तो व्यवस्था छ भनेर सोधखोज गरेको प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । ‘प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीका रूपमा परिवर्तन हुन धेरै समस्या छैन,’ उनले भने ।
एनसेलले पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता हुने र सेयर बाँडफाँटका लागि आवश्यक प्राथमिक तयारी गरेको भए पनि के विषयमा अडकिएको हो भन्न नमिल्ने कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्स्पर्ट मिलनमणि शर्माले बताए । दूरसञ्चार सेवामा एनसेललगायत प्राइभेट कम्पनीको संख्या ५ रहेको छ ।
‘अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशी लगानी भएको निजी कम्पनीको हकमा बाटो दिए कारबाही अगाडि बढाइनेछ,’ झाले भने, ‘दूरसञ्चार कम्पनीका विषयमा यसअघि कुनै कम्पनी नगएकाले अन्योल भएको हो, प्रतिवेदनले पब्लिक हुन नमिल्ने भनेमा चुप लागेर बस्नेछौं ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यकता नै छैन । ‘आफ्ना नजिकका कम्पनीलाई काम दिने उद्देश्यले यस्ता अध्ययन कार्यक्रम हुने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजेट ठूलो होइन तर यस्ता अध्ययनका धेरै कार्यक्रम छन् । जसको कुल लागत जोड्ने हो भने रकम ठूलो हुन्छ ।’
‘सेवा सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट सबै आवश्यकता र मिल्ने/नमिल्नेबारे बुझिसकेकाले फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने थिएन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७२ १८:०७